Lavina diamondra pads Manufacturers and Suppliers | China Lavina diamond pad Factory
Kiraro fikosoham-bary diamondra Lavina misy fizarana roa boribory
Ny kiraro fikosoham-bary vita amin'ny diamondra Lavina miaraka amin'ny ampahany boribory roa dia ampiasaina amin'ny milina fitotoana gorodona Lavina, ny fizarana boribory lehibe roa dia mahatonga azy ho mateza kokoa ary tsy hamela ratra lalina amin'ny tany. Ny famolavolana fototra fanovana haingana dia mora ny mametraka sy midina avy amin'ny milina.
Fizarana mahitsizoro roa Lavina diamondra fitotoana vato
Ny blocs fikosoham-bary Lavina misy fizarana 2 mahitsizoro dia maranitra ary manana androm-piainana lava, izay tsara ho an'ny fampitaovana sy fiomanana amin'ny simenitra. misy fatorana isan-karazany mba hifanaraka amin'ny hamafin'ny gorodona.
Lavina double Rhombus segment diamondra fitaovana fikosoham-bary
Double Rhombus fizarana diamondra pads dia mahery setra kokoa noho ny mahazatra fizarana, dia manatsara ny simenitra fikosoham-bary fahombiazana. Ny fatorana metaly samihafa dia natao ho an'ny gorodona simenitra mafy. Ny loko sy ny marika namboarina dia misy araka ny takian'ny mpanjifa.
Ny takelaka / kapila diamondra fitotoana dia manome ny fampisehoana ambony indrindra amin'ny fampiharana fanomanana gorodona rehetra ao anatin'izany ny fanamboarana simenitra, ny fisaka gorodona ary ny fiparitahana mitambatra. Izy io koa dia miasa amin'ny milina rehetra misy connecteur samihafa ary azo amboarina araka izay ilainao.